မြန်မာ (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ကစားသူများအတွက် ဘလက်ဂျက် နည်းဗျူဟာ | BlackJack77
ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းအနက်ရောင် jack ကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများဖျော်ဖြေမှကြွလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ Blackjack မဟာဗျူဟာလမ်းညွှန်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ interaction ကအားလုံး၏အရှိဆုံးအရေးပါဇာတ်စင်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ အဲဒီမှာသတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးကဒီမှာဖွင့်ပေမယ့်မိန်းမောတွေဝေမခံစားရဘူး။ သငျသညျအခြေခံအားဖြင့်စတင်မတိုင်မီအမှုအရာ၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြေရှင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
Blackjack များအတွက်မဟာဗျူဟာများဝင်ရောက်မီ, သင်မှာရှာနေ Blackjack ဘယ်လိုသိကြရပေမည်။ ပထမဦးစွာကတ်များကုလားဖန်ထိုးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုကြသည်မည်မျှ Blackjack အတွက်ကုန်းပတ်ကိုသိရန်ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်ပါ။ အများစုက software ကို developer များဤအချက်အလက်ပါဝင်သည်။ ဖဲဝေပျော့ 17 ရဲ့အပေါ် hit ခွင့်ပြုခဲ့လျှင်ထို့နောက်ထွက်ရှာပါ။
သငျသညျတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကာစီနိုလောင်းကစားရုံအပေါ်အွန်လိုင်းသွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်, သို့မဟုတ်သင့် desktop သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကနေ NetEnt, Playtech, လက်ရှိအချိန်ဂိမ်းသို့မဟုတ်အခြား software ကို developer များအားဖြင့်ဂိမ်း၏နာမည်ကျော်ဗားရှင်းကစားရန်ပါတော့မည်။ သငျသညျအောက်ပါအချက်အလက်များကိုကြေညက်ကြပြီးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
လူပျိုကုန်းပတ် Blackjack မဟာဗျူဟာ - ဆော့ဖ 17 နှင့် Hard 17
ဒီချဉ်းကပ်မှုအကျင့်ကိုကျင့်ရသောအောက်မှာစည်းကမ်းချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: ပိုင်းခြားကိုလည်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ချနှစ်ဆနှစ်ခုကတ်များမဆိုပေါင်းစပ်အပေါ်နှိမ့်ချနှစ်ဆမှခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း, လက်နက်ချတစ်ခု option ကိုမဟုတ်ပါဘူးခံရ။ အဆိုပါကုန်သည်မဆို 17 (အဆိုပါ S17 အုပ်ချုပ်မှုကို) ရက်နေ့တွင် hit ဖို့အခွင့်ရမဟုတ်ပါ။ ထိုအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါ, အောက်ပါ Blackjack ဇယားလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်, တစ်ခုတည်းသောကုန်းပတ် Blackjack လေးသာမှုတစ်ခုအံ့သြ -0,15% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အခုတော့လာသောအခါတိုင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုအတူတူပင်ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ပွဲစားတစ်ဦးအပျော့ 17 (အဆိုပါ H17 အုပ်ချုပ်မှုကို) ရက်နေ့တွင် hit ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်, အောက်ပါ Blackjack hit နေထိုင်ဇယားလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်, အိမ်အစွန်းနည်းနည်းမြင့်တက်ပြီးအပြုသဘော + 0.04% အထိရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လမ်းညွှန်ရန်အလွန်ဆင်တူပါတယ်။
နှစ်ချက်ကုန်းပတ် Blackjack မဟာဗျူဟာ - ဆော့ဖ 17 နှင့် Hard 17
အခုတော့ရဲ့အခွအေနအတူတူပါပဲလို့ပြောပါစေ, နှစ်ကုန်းပတ်ယခုကတ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်နှင့်ဖဲဝေနေပါစေကပျော့သို့မဟုတ်ခက်ပါတယ်လျှင်, 17 ရက်နေရမည်။ ကျွန်တော်ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Blackjack စုံလင်သောမဟာဗျူဟာလျှောက်ထားပါတယ်, ကြှနျုပျတို့အနက်ရောင်မဟာဗျူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့2deck လျှောက်ထားသောအခါ, အိမ်သူအိမ်သားအားသာချက် + 0.20% ဖြစ်ပါတယ်။ မဆိုးမှာအားလုံး။ ဤတွင်ဇယားဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်သူအိမ်သားဖဲဝေသူတစ်ဦးအပျော့ 17 တို့သို့သည့်အခါတစ်ဦးအပိုဆောင်းကဒ်ကိုတောင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သောအခါမူကား, နှစ်ဆကုန်းပတ် Blackjack လေးသာမှုတစ်ဦး + 0.40% နှင့်အတူသူတို့ကိုမျက်နှာသာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့2ကုန်းပတ် Blackjack မဟာဗျူဟာအလေးသာဖြစ်ကြသည်။
4 ကုန်းပတ် Blackjack မဟာဗျူဟာ - ဆော့ဖ 17 နှင့် Hard 17
အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခြေရာခံခြင်း: ဤနည်းဗျူဟာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာထားတဲ့အောက်မှာစည်းကမ်းချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: ခွင့်ပြုနှင့်လည်းပိုင်းခြားနောက်မှဆိုကတ်နှစ်ခုအပေါ်ကဆင်းနှစ်ဆ။ လက်နက်ချတစ်ခု option ကိုမရဖြစ်ပြီး, ဖဲဝေသူတို့ကဆို 17s လေသောအခါအကာအပိုကဒ်တောင်းရာမှချုပ်တည်းသော။ ကျနော်တို့မဟာဗျူဟာအနိုင်ရဒီ Blackjack အသုံးပြုသောအခါအခွင့်အလမ်းတွေကိုသာ + 0.38% အတွက်အိမ်တော်ကိုမျက်နှာသာ။
အိမျ croupier ပျော့ပျောင်း 17 တို့သို့သည့်အခါတစ်ဦးအပိုဆောင်းကဒ်ကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုလိုက်သောအခါ, ၎င်းတို့၏အလေးသာ + 0.59% အထိတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤ Blackjack ရိုးရှင်းသောမဟာဗျူဟာဇယားအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှရဲ့နဲ့ Blackjack အတွက် hit ဖို့မရသောအခါသူကတော်တော်လေးအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။ အပြည့်အဝသေချာသူတို့အလုပ်လုပ်စေရန်အနက်ရောင်ပေါက်ဘို့ငါတို့မဟာဗျူဟာများအတိုင်းလိုက်နာရန်သတိရပါ။
ပညာရှင်များ၏တစ်ဦးကအများကြီးလည်းသူတို့ရဲ့ Blackjack မဟာဗျူဟာ6ကုန်းပတ်နဲ့ 8 ကုန်းပတ် Blackjack မဟာဗျူဟာအတိုင်းဤဇယားကိုသုံးပါ, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးကုန်းပတ်အမြဲအိမ်တော်ကိုရဲ့အစွန်းမျက်နှာသာကြောင်းစဉ်းစားပါ။ သငျသညျပြီးသားရှိသည်မဟုတ်အမှု၌, ပိုကောင်းတဲ့ကုန်းပတ်၏နံပါတ်၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ရန်အောက်ပါအဆင့်မြင့် Blackjack မဟာဗျူဟာအသေးစိတျမှာကြည့်လိုက်ပါ။
Blackjack Switch များ၏ဂိမ်း
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကြိုးစားသို့ဆိုလျှင်, သင်သည်ဤအပြောင်းအလဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Blackjack switch ကိုအလေးသာတစ်ဦးအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေမယ့်နေတဦးတည်းကဲ့သို့ပင်အသုံးပြုနေပါသည်စဉ်းစား + 0.58% ရှိပါတယ်။ ဒါက Blackjack cheat sheet ပေမယ့်ကိုကိုးကားထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှု-အခန်းတစ်ခန်းထဲကနေလုပ်နေလုပ်နေအဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်ကောင်းတစ်ဦးအရာပဲ!
Multi-ကုန်းပတ် Blackjack မဟာဗျူဟာဇယား
ဤဇယားကိုမဆိုတစ်စုံအပေါ်နှိမ့်ချနှစ်ဆ, ပိုင်းခြားပြီးနောက်ချနှစ်ဆခွင့်ပြုဂိမ်းကိုဒီဇိုင်းနှင့်ကတ်များ၏6ကုန်းပတ်လျက်ရှိ၏ ဒီအများကြီး Blackjack လေးသာမှုဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသင်ဤစိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သည့်အခါအလွန်အသုံးကြွလာတော်မူပါလိမ့်မယ်။ & Odds မင်းမျိုး၏မျက်နှာသာအတွက် + 0.66% န်းကျင်ရှိပါတယ်။
ဖော်ပြချက်: မဲရေတွက်ကတ်များကိုမကြာခဏပါရမီမာစတာနှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်ရိုးရှင်းရဲ့နေကြသည်။ ယူအားလုံးသည်အသက်တာ၌အခြားအရာအားလုံးကဲ့သို့ကတိကဝတ်များနှင့်အလေ့အကျင့်ပါ!
အိုကေ, ယခုတွင်သင်သည်လည်းအလေးအနက်ရတဲ့ထားပါ! Blackjack ကဒ်ရေတွက်ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးလောင်းကစားရုံရဲ့အစွန်းရိုက်နှက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကဒ်ရေတွက်မဟာဗျူဟာ employ မှမြန်မာနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လောင်းကစားရုံသိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက်အနုပညာကျွမ်းကျင်ကြသူလူများအတွက်ကြည့်အပေါ်အမြဲရှိပါတယ်။
Blackjack အတွက်ကဒ်ရေတွက်ကဘာလဲ? တချို့ကကအနုပညာရဲ့လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကလုပ်နိုင်စွမ်းတွေအများကြီးယူသင်ကဒ်များ၏ရလဒ်ကိုနှင့်မသိမသာကလုပ်နေတာကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဒီတော့ကောင်းစွာသင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်နှင့်ရထားယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ဖြစ်ခြင်းအာရုံစိုက်ကြောင်းသဘောတူသည်။ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့အနုပညာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်သဘောတူကြဘူး။
ကတ်များ Blackjack ရေတွက်ဖို့ကိုဘယ်လို
Blackjack ရေတွက်စနစ်များကိုများများထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်။ လူအတော်များများပင်သစ်တစ်ခုဝါသနာသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအပေါ်အချို့သောစိတ်အားထက်သန်ကစားသမားများနှင့်အမြတ်အစွန်း၏အားသာချက်ယူပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ကဒီမှာပါပဲ။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူဤကျယ်ပြန့်ဂုဏျ system ကိုဝေမျှပါမယ်။
သင်ဤ technique ကိုသုံးပြီးကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏အားသာချက်ယူကျွမ်းကျင်ရမယ်အချို့လှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာသင်ဒီမှာ posted သော Blackjack ၏အခြေခံမဟာဗျူဟာ, သင်ယူဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
သငျသညျပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ဇယားနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခဲ့ကြသောကြောင့်, ဒါဟာကောင်းပါတယ်။ ဒုတိယအ, သင်ကတ်များမှတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်, ကြှနျုပျတို့ကိုသင်မင်္ဂလာပါ-Lo method ကိုအသုံးပြုအကြံပြုအပ်ပါသည်။2မှ6ကတ်များ +1, 7, 8 ကိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,90 တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကြွင်းသော Ace ကိုအပါအဝင် +1 ကိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။
ကောင်းသော! ကျနော်တို့ Blackjack ကတ်များရိုးရှင်းသောညာဘက်ရေတွက်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်က်မှတဆင့်င်? အခုတော့သင်ရုံနိမ့်ဆုံးလောင်းကစားနှင့်ထိုကစားနည်းကိုင်တွယ်ရန်အခြေခံနည်းဗျူဟာကိုသုံးနေစဉ်တစ်ဦးချင်းစီတ croupier အပေးအယူဂိုးသွင်းတာပေါ့။ သင်အလုံအလောက်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းနေစဉ်ကတ်များရေတွက်ဖို့ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ဂိမ်းမှယခင်, သင်သည်သင်၏ bankroll နှင့်သင့်လောင်းကစားယူနစ်ခန့်ထားပြီရပါမည်။ အကြှနျုပျတို့သညျနိမ့်ဆုံးနှင့်အတူစတင် 1000 အလောင်းအစားယူနစ်တစ်ခု bankroll စောင့်ရှောက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါကလမ်း, အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စနစ် အသုံးပြု. 1% အောက်မှာရှိပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကုန်းပတ်များ၏အရေအတွက်အားဖြင့်သင့်အမှန်တကယ်ရေတွက် Divide နှင့်အညီအလောင်းအစား။ အမှန်တကယ်ငွေနှင့်ဘာမှမကြိုးစားမီအခမဲ့အွန်လိုင်းလေ့ကျင့်ဖို့သတိရပါ!